अन्डाको सेतो भाग खानुका फाइदा हरु - ज्ञानविज्ञान
अन्डाको सेतो भाग खानुका फाइदा हरु
भरपूर प्रोटिन पाइने अन्डामा सेतो र पहेँलो भाग हुन्छन् । धेरैले ठानेका हुन्छन्, अन्डाको सेतोभन्दा पहेँलो भाग खानु लाभदायी हुन्छ ।
तर, यो सोचाइ गलत हो । बरु, पहेँलो छुट्याएर सेतो भाग मात्रै खानुस्, यस्ता फाइदा हुन्छन् :शून्य कोलेस्ट्रोल स् अन्डाको सेतो भागमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा हुँदैन । एउटा अन्डामा हुने १८० मिलिग्राम कोलेस्ट्रोल पहेँलो भागमा मात्रै हुन्छ । तपाईं मधुमेह रोगी हुनुहुन्छ भने सेतो भाग मात्रै खाने गर्नुस् ।
आवश्यक प्रोटिन स् अन्डाको सेतो भागमा प्रोटिनको मात्रा पर्याप्त हुन्छ । एउटा अन्डाको सेतो भागमा चार मिलिग्राम प्रोटिन हुन्छ । सेतो भाग सेवन गरिसकेपछि कोलेस्ट्रोल हुने पहेँलो भाग खानुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । सेतो भागमा अमिलो एसिडको मात्रासमेत प्राप्त हुने भएकाले शरीरको मांसपेशीलाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ ।
न्यून क्यालोरी स् अन्डाको सेतो भागमा क्यालोरीको मात्रा कम हुन्छ । त्यसैले ब्ेरकफास्टका लागि सेतो भाग उत्तम हुन्छ । एक अन्डामा झन्डै ७० क्यालोरी हुन्छ । जसमध्ये सेतो भागमा आधाभन्दा पनि कम हुन्छ । तर, तपाईं तौल घटाउन डाइटिङ प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने पूरै अन्डा खाए पनि खराब गर्दैन । बोसोरहित स् अन्डाको सेतो भागमा बोसोको मात्रा निकै कम हुन्छ ।
यसमा जम्मा पाँच मिलिग्राम फ्याट हुन्छ । उचित खनिज स् अन्डाको सेतो भागमा खनिजको मात्रा भरपूर हुन्छ । यसमा पोटासियम, सेलेनियम, फोलेट, क्याल्सियम, फस्फोरसको उचित मात्रा हुन्छ । अन्डाको सेतो भाग मात्रै खानाले ब्लडप्रेसर नियन्त्रण गर्नुका साथै शरीर स्वस्थ रहन्छ ।
Topics #अन्डा #अन्डाको सेतो भाग #प्रोटिन
Don't Miss it कुन बार जन्मिएका मान्छेसँग कस्ता-कस्ता गुण हुन्छन् ?
Up Next पैतालामा यस्ता चिन्न भएका व्यक्ति हुन्छन् भाग्यमानी
गर्भावस्थाको समय खानपानको विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा सामान्यतया सबैलाई थाहा हुन्छ । तर, के तपाईंलाई थाहा छ, गर्भधारण गर्नका…
कतिपय चिजहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि खाली पेटमा खानु हुँदैन, जस्तै
ग्रीन टिः हामीहरु शरीरको बोसो घटाउन, ब्लडप्रेसर नियन्त्रण गर्न बिहानै ग्रीन टि पिउने गर्छौं । तर ग्रीन टिमा हुने कैफिनले…
बेसार खानु हुन्छ नि ? यसका अनगिन्ती फाइदा यस्ता छन्